Sida Loogu Barto Inaad Naftaada Ogaato: 15 Hacks -ka Fudud Ee Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Ogaado Naftaada: 15 Hacks Fudud
Waxaan xusuustaa Tattoo -koodii ugu horreeyey; waxay ahayd weedh ku qornayd Laatiin waxayna ula jeeday “Naftaada Ogow”. Run ahaantii ma dhihi karo halka waxyiga ay ka timid, laakiin mar walba waan ogaa in safarkan nolosha, ogaanshaha qofka dhabta ah ee aad tahay qof ahaan, iyo fahamka naftaada, ay fure u tahay hagidda ujeeddada nolosha qofka.
Waqti ka dib, waxaan ku dhaygagi doonaa tattoo -ga, oo waxaan is xusuusin doonaa, wax kasta oo aad sameyneyso, hubso inaad naftaada taqaan. Fasalkayga anshaxa hal mar, iyo hadda oo aan ka fekero, tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhiirri -gelinta qaadashada tattoo -gaas. Waa maxay sababta Laatiin? Hagaag, taasi waa sheeko maalin kale.
Waxaan xusuustaa fududeeyaha inuu qaatay koorso ku saabsan 'nafsadda' iyo sida ay u jiraan dhinacyo kala duwan oo ku saabsan ogaanshaha naftaada. Waxaa jira qayb aad dunida tusto, qayb adduunku arko oo aadan arkayn, naftaada runta ah iyo taada qarsoon. Tani waxay u ekaan kartaa waxoogaa dhib badan laakiin markaa waxay igu sii kordhisay rabitaan inaan fahmo sidaan isu baran karo.
Aniguba, markii aan daraasad dheeri ah sameeyay waxaan ogaaday in qaar ka mid ah sababaha aanan waligey is aqoon, ay tahay inaan filayay inaan helo hal qeexitaan oo diyaar ah ama buug -gacmeed, oo ka soo horjeedda wax ka qabashada fikradda ah in aniga oo dhan aan ka kooban yahay qaybo. Miyaad odhan lahayd si dhab ah baad isu garanaysaa?
Maxay muhiim u tahay inaad naftaada taqaan?
Ogaanshaha qofka aad tahay, asal ahaan waa tallaabada ugu horreysa ee si dhab ah loo fahmo ujeeddada noloshaada. Inaad ogaato naftaada, waa inaad noloshaada siiso macno.
Marar badan, waxaan maqalnaa weedha “isku dayaya inaan is -helo” tanina waxay sii socotaa sannado, qaarkeenna weligood ma samayn, taasina waa sababta oo ah runtii ma jiraan wax la helo. Naftaada halkaas kuma sugna in la soo qaado, habsocodkani waa safar shaqsiyeed, mid gudaha ah oo miyir qaba.
Maxay muhiim u tahay maxaase dhici kara haddii aadan waligaa is baran?
Fahamka sababta ay muhiim u tahay in aad is baratid, waxaa loo baahan yahay in la garto astaamaha muujin kara in qofku qabo faham la'aan naftiisa.
Haddii inta badan ay kugu adkaato inaad go'aan ka gaarto, oo aad ku dhegto go'aan aad qaadatay, ama aad si kala duwan ula dhaqanto dad kala duwan oo aadan u muuqan karin inaad fahamsan tahay sababta aad u sameyso waxyaabaha aad sameyso, markaa kuwani waa astaamaha, waana waa wakhti aad naftaada ku baran lahayd.
Ogaanshaha naftaada, cidda aad run ahaantii tahay, waxay kaa caawineysaa inaad fahanto ujeeddada noloshaada. Waxay kugu beertaa isku kalsooni, sida lagu fahmi karo weedha; "Inaad yeelato dareen nafsadeed". Ogaanshaha naftaada ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad gaarto go'aano wanaagsan iyo xulashooyinka nolosha. Markasta oo aad naftaada fahanto, waxaa sii kordheysa inaad si fiican u awooddo inaad fahanto adduunka kugu xeeran iyo dhibaatooyinka shaqsiyeed.
Hadda waad garanaysaa calaamadaha, iyo sababta ay muhiim u tahay inaad is baratid, laakiin markaa sidee baad naftaada ku baran kartaa. Mararka qaarkood, way u fududdahay sida is-milicsiga iyo ka-fiirsashada, oo ku lug leh is-weydiinta tan su'aalo ah.
Waqtiyo kale, waxaad u baahan tahay inaad samayso waa wax yar oo faahfaahsan waana hab dhab ah. Waxaan la imid 15 hacks oo fudud oo aan isticmaalay sanadihii la soo dhaafay, welina aan adeegsadaa ilaa maantadan la joogo, maxaa yeelay inaad is baratid ma aha dukaan hal mar ah. Jebitaannadani ma laha amar gaar ah.
HACK 1: Ogow waxyaabaha kiciya
Kiciyeyaashu waa waxyaabo noo keena falcelin. Falcelintani waxay noqon kartaa mid wanaagsan, ama mid xun; waxyaabaha kiciyana waxay noqon karaan kuwo shaqsiyeed iyo shucuur.
Tusaale ahaan, qof ayaa laga yaabaa inuu si fudud u kiciyo filim qiiro leh ama dood ku saabsan qof guursanaya. In la hubiyo waxa kugu kiciya, waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka niyadda oo aan xasilloonayn, maxaa yeelay waad taqaanaa naftaada iyo kiciyayaashan, waxaad awood u leedahay inaad ka fogaato iyaga, iyo xaaladdooda.
HACK 2: Ku tababar is-milicsiga iyo is-dhexgalka
Waxaan nahay wax -soo -saarka ficillada, iyo dabeecadaha, caadifadaha, iyo go'aammada, dhammaan kuwan oo dhan waxay qaabeeyaan nolosheenna si uun ama si kale. Dib u milicsiga wixii la soo dhaafay, xitaa kuwii hore ayaa naga caawin kara inaan si fiican u fahanno nafteena oo aan is qiimeyno. Waxaan dib u milicsan karnaa dhacdo gaar ah, iyo sidaan uga jawaabnay.
Macluumaadkan ayaa naga caawin kara dhacdooyin badan oo soo socda. Is-milicsigu wuxuu kaa caawin karaa go'aan-qaadashada, iyo sida kor lagu tilmaamay, mid ka mid ah calaamadaha ah inaadan garanayn naftaada waa awood-la'aanta go'aan qaadashada.
Dhex -dhexaadintu waa hab lagu falanqeeyo qaababka fikirkaaga, shucuurta, dhiirigelinta, sababta aad wax u qabato. Milicsiga iyo dib -u -fiirinta labaduba waa geeddi -socodyo gudaha ah oo kaa caawin kara inaad is -baratid.
HACK 3: Ogow caadooyinkaaga
"Waxaan nahay waxa aan ku celcelino" - Aristotle
Caado waa wax la sameeyo si isdaba joog ah ilaa ay ka noqoto qayb aan ku talagal ahayn. Tusaale ahaan, cidiyaha qaniinyadu waa caado, sigaarku waa caado, habeen dambe oo la hayo waa caado, akhrinta 3 saacadood waa caado… Haddii aan akhriyo 3 saacadood maalin kasta, aad baan ugu socdaa inaan noqdo aqoonyahan.
Haddii aan jimicsi sameeyo maalin kasta, jirdhiska ayaa qayb iga noqon doona, oo haddii aan calaliyo ciddiyahayga, si fiican, qofku si fudud buu u garan karaa halka ay taasi u socoto. Ogaanshaha caadooyinkaaga, gaar ahaan ogaanshaha kuwa ay tahay in la qariyo oo la tuuro waxay naga caawin kartaa inaan is baranno.
HACK 4: Garaw dareenkaaga
Xatooyaddan ayaa ah midda ugu adag aniga, maxaa yeelay shucuurtu waxay saldhig u tahay wax kasta oo aan sameyno. Waxay saamayn ku yeelataa dabeecadaha, fikradaha, iyo go'aan qaadashada. Aadanuhu waa shucuur shucuur leh, waxay saameysaa wax kasta oo aan sameyno. Laakiin sida qirashada shucuurtaadu ay kaaga caawin karto inaad is baratid. Tani waxay la mid tahay ogaanshaha waxyaabaha kiciya.
Ficiladu waa joogto, oo sidaas oo kale, tani waxay macnaheedu noqon kartaa in uu jiro dareen joogto ah ama durdurrada noocaas ah; adiga oo qiraya shucuurtaada, waxaad si fiican u awood u leedahay inaad xakamayso, go'aammo fiican qaado taasina waxay horseedaa is-baraarujin taas oo ka mid ah saldhigyada ogaanshaha naftaada.
HACK 5: Beddel bay'adaada
Ma aha wax qarsoon inaan nahay wax -soo -saarka deegaanka aan ku jirno. Deegaanku wuxuu saamayn karaa sida aad u aragto adduunka kugu xeeran, qaababka dabeecadda, niyadda iwm. ; la macaamilka dhaqammada iyo bulshooyinka kala duwan, waxaad heleysaa dareen wanaagsan oo adduunka kugu xeeran iyo sida aad ugu habboon tahay qorshaha weyn ee waxyaabaha.
HACK 6: Faham oo waji cabsidaada
Qaarkeen inta badan waxay ku kooban yihiin cabsidayada; cabsida guuldarrada, cabsida in la ceebeeyo ama khalad iwm iwm taasina waxay keentay in aan inta badan is hortaagno in aan nolosha sahaminno si buuxda.
Tusaale ahaan, cabsida masraxa ayaa qofka ka hor istaagi karta inuu ogaado sida ay u noqon karaan jilaa weyn. Qaybo ka mid ah nafteena ayaa sii joogi karta iyada oo ay ugu wacan tahay cabsida qaarkood oo si hoose ugu dhuunta. La kulmida cabsidaada, waxay kaa caawineysaa inaad qof ahaan u korto waxayna kaa caawin kartaa safarkaaga is -helidda.
HACK 7: Baro qiyamkaaga
Maxaad u taagantahay? Maxaa ku dhiiri galiya qof ahaan? Jacaylku ma ku dhiiri galiyay mise wuu haggaa ?, cadaalad ?, run? Xorriyad ?, Geesinimo? Waxaas oo dhan waxay ku jiraan si kooban, waxa qiimayaashaadu u taagan yihiin. Inaad ogaato waxa qiimayaashaadu yihiin, waa tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, si dhab ah loo fahmo qofka aad tahay iyo inaad is baratid.
HACK 8: Oggolaanshaha isbeddelka
Isbeddelku waa qayb lama huraan ah oo nolosha ka mid ah. Xaaladuhu way isbeddelaan, dhacdooyinku way is beddelaan, marar badanna, annaga bani -aadam ahaan, aad bay u saamaysaa. Dhimashada qof aad jeceshahay, xiriirkii dhammaaday, u guuritaankii magaalo cusub iwm.
Qaarkeen waxay ka baqayaan isbeddel, sidaas darteedna, waxaan uga tagnaa waxyaabaha sida ay yihiin sababtoo ah ma xamili karno caadifad ahaan wixii ku yimaada kala tag, ama kala tag, ama nabadgelyo. Oggolaanshaha isbeddelku inuu yahay hab aad naftaada ku baratid waxay kaa caawinaysaa inuu qofku yeesho astaamo ay ka mid yihiin dulqaadka iyo adkaysiga.
HACK 9: Qaado imtixaanka qofnimada
Waan ogahay inay tani kuugu ekaan karto wax yar “Dhaqan Pop”, laakiin qaar ka mid ah su'aalahan imtixaanku waxay leeyihiin aasaas adag xagga dabeecadaha, caadooyinka, qaababka fikirka, ficillada iyo shucuurta; waxaas oo dhami waxay wax ku biiriyaan qofka uu yahay.
Adiga oo ka jawaabaya su'aalahan oo si dhab ah u dhex geliya natiijooyinka, waxaad ku ogaan kartaa sababta aad sidaas u tahay. Tani lama dhagax dhigin, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qodobo la xuso oo badiyaa waa madadaalo. Haddaba maxaad u tijaabin weyday. Eeg kuwan. https://www.wellandgood.com/types-personality-tests/
HACK 10: Hel hiwaayad cusub
Hiwaayaduhu waa waxqabadyo aan ka qayb qaadano wakhtiga firaaqada si aan u nasino maskaxdeena oo aan u nasanno. Dadka qaar waxay lacag ka helaan hiwaayadooda. Tijaabinta wax cusub, sida hiwaayad cusub, waa hab lagu dhiirrigeliyo naftaada oo lagu ogaado qaybo ka mid ah oo laga yaabo inay qarsoon yihiin. Hiwaayado cusub waxaad isku dayi kartaa; rinjiyeynta, tolidda, dhoobada, iwm.
HACK 11: Saxafiga
Journallng waxaa loola jeedaa qorista iyo haynta diiwaanada dhacdooyinka iyo dhacdooyinka. Waxay u eg tahay xusuus qor si uun, halkaas oo aad ku duubto waaya -aragnimadaada maalinlaha ah. Waxaad wax ka qori kartaa meelaha aad tagtay, dadka aad la kulantay, waxa cusub ee aad isku dayday ama aad rabto inaad isku daydo. Waxaad kaloo la socon kartaa dareenkaaga waqti ka dib.
HACK 12: Ogow meelaha aad ku fiican tahay iyo meelaha aad ku liidato
Maxay tani muhiim u tahay sidee bay tani kaa caawin kartaa inaad si fiican isu baratid? Kalsoonida naftaada, taas oo ah mid ka dhalatay ogaanshaha naftaada, waxay la timaaddaa aqoonta durugsan ee waxa aad maareyn karto, meesha aad ku barwaaqoobi doonto, iyo meesha lagaa horjoogsan karo.
HACK 13: Ku kalsoonaanta dareenkaaga
Codkaas yar ee madaxaaga ku jira ee ku diganaya waa dareenkaaga. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaanaa codka sababaynta. U fiirsashada dareenkaaga waa hab lagu barto naftaada maxaa yeelay codka sababtu waa sida jeegga iyo dheelitirka shucuurteena, fikradaha iyo ficilladeena. Kahor intaadan go'aan gaadhin, isku day inaad hesho xoogaa daqiiqado ah oo aamusan, oo dhagayso codkaas gudaha ah. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha aan isku baranayo, anigoo ku kalsoonaanaya dareenkayga.
HACK 14: Ogow xuduudahaaga
Xudduuduhu waa xayndaabyo, carqalado, ama kala -qaybin, oo kala saara hal shay ama meel mid kale. Hadda, bini -aadam ahaan, xuduuddani waa lama huraan si aynaan nafteena u sii fidin. Maxay yihiin waxyaalaha aadan u dulqaadan doonin? Soohdintu waxay caawisaa qeexidda qodobbada heshiiska, ama xiriirka. Haddii aadan lahayn ama aadan aqoon xuduudahaaga, waxay ku dambayn kartaa waxyaabo ay ka mid yihiin in lagu qaddariyo, oo aadan awoodin inaad hesho is-fulin.
HACK 15: Weydii agagaarka
Hab kale oo aad naftaada ku baratid, waa inaad weydiiso saaxiibbada iyo qoyska waxa ay adiga kaa qabaan. Weydii inay kuu tilmaamaan nooca qofka ay u malaynayaan inaad tahay. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad ku soo biiriso waxa aad naftaada ku ogaatay, markaas baad falan -qayn doontaa, ama samayn kartaa is -baadhitaan oo aad naftaada si fiican isu baran kartaa.
Gebogebadii, u -wareegidda adduunkan aan ku noolnahay, wuxuu u baahan yahay dadaal aad u weyn; dadaalka lagu fududayn karo haddii aad si dhab ah u taqaanid naftaada iyo waxa aad u taagan tahay. 15kan hacks ee fudud ayaa ah wax aad isla markiiba ku bilaabi karto. Khasab kuguma aha inaad wax walba hal maalin ku qabato, waxaad qaadan kartaa dhowr mar markiiba.
Haddaba, midkee ayaad marka hore ka bilaabi doontaa? Saxafinimo? Barashada qiyamkaaga? Ama laga yaabee inaad aad u xiisaynayso inaad aragto waxa imtixaannada shaqsiyeedku kuu hayaan.
Faallooyinka Imarketslive: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Forex Trading
Iibsashada baabuur cusub waa maalgashi muhiim ah, waana inaad si taxadar leh u miisaamaysaa fursadahaaga. Laakiin, haddii aad dooranayso…